Indlela ukuqeda kwabokufika nomphakathi?
Uma nizizwa nesaba lapho ukuthi bonke abanye bayosola wena uma ngokugxila njalo sendlela izinto engase yonakale, noma ingabe nje ahlale amahora ngemva iphathi bese ucabanga zonke izinto kancane ukuthi wathi engacabanganga, khona-ke ungase ukuhlupheka kusukela kwabokufika nomphakathi - ukuphazamiseka ezihlobene nokukhathazeka kusuka kunoma iyiphi ukuxhumana nomphakathi. Inkinga enkulu endaweni yempilo yengqondo, isibonelo, i-Nyakatfo Melika. Cishe abayizigidi ezingu-15 abantu baseMelika uhlushwa kwabokufika nomphakathi ifomu ezinye noma degree. ukukhathazeka Ezintsha phambi ukusebenza komphakathi - lokho kulungile, kodwa hhayi uma uhlushwa ke ubuntu bakho. Nakhu ongakwenza ukuyinqoba.
Musa ukunqotshwa kwabokufika nomphakathi! Kunalokho, kuvume inkinga bese uthi, "Sawubona, ukwesaba kwangaphakathi, ngenze izinqumo lapha." Noma yini bayakwazi ukuphikisana inkinga yakho, kufanele sikwenze. Ngaso sonke isikhathi uma ukuxosha ukuhlaselwa ukwesaba, uyoba reprogram ingqondo yakho futhi ukunciphisa izinkinga zakho amandla phezu ngokwabo. kwabokufika Komphakathi, okuyinto ungenawo unake, kungaholela ngokusebenzisa kabi utshwala, ukucindezeleka, isizungu, ingasheshi ukukhula ukukhula professional kanye amathuba ukuthi ngeke obzavedetes abangane noma umlingani. Ngakho awukwazi ukuphila! Futhi yingakho nawe nakanjani kudingeka bazizwe yokwesaba zawo futhi ahlangane naye ubuso nobuso. Kufanele uqaphele ukuthi ungaphila ukuphila kwakho siqu, ngisho uma kunokuthile scary, kodwa lutho olubi kuzokwenzeka.
izifundo eziningi ukukhombisa ukuthi noma yikuphi ukwelashwa yokukhathazeka, lokusho ukuvezwa nesineke, kukhona impumelelo. Abantu bavame ukucabanga ukuthi kwenziwe ukugwema abakwesabayo, futhi ngenxa yokwesaba ukuthi kugwenywe. Ukuze aphule kulo mbuthano ngonya, une ukuvula phambi ukwesaba kwazo okukhulu. Bhala phansi ephepheni izimo ezibangela okwesabayo, ngokulandelana ukukhathazeka okwandayo. Dala ngesimo esenzeka ngokoqobo, okuyinto esokuqala ohlwini lwakho, bese ukuhambisa kancane kancane kude ephephile izimo ezimbi kakhulu. isigaba sabaphathi ingaqala nge ukuze uthole isingezansi ibonwe obedlula ngendlela, lapho lo noma ukuthi into, futhi ukuqeda ukuze ucele siqondise ukwandisa. Futhi indlela umphathi bakho bazothini isicelo sakho, akunandaba. Kubalulekile ukuthi uthathe isinyathelo. kwabokufika bezenhlalo budinga ukuba ube onokuthula ngehlise umoya, futhi udinga zinikeza amacebiso amaningi okudlula wakhe.
Yenza sengathi intatheli
Uma une lutho umphakathi, kufanele ufunde ukubuza imibuzo, ngoba ibe ithuluzi elikahle kakhulu kuwe. Buza imibuzo edinga impendulo eningiliziwe, ezifana, isibonelo, "kanjani ukumhlangabeza?", Noma ungase ucele iseluleko ngokulinganisa: "Ukhona yini ubabone movie ezinhle?". Imibuzo navuswa ngokuphathelene nezimpendulo ezanikezwa ukuze wenze inkulumo ujule. Imibuzo mayelana lapho ukuthulula yena uketshezi lapho ukuya ethoyilethi futhi lapho umcimbi usuphelile, ungabali.
The more ukhathazeke futhi avumele ukukhathazeka abuse impilo yakho, kulapho wena ukubeka ingqondo yakho isezintweni injabulo nokukhathazeka, futhi kulapho ukuxhumana ukukhathazeka kwawo ezindaweni ezithile nemicimbi. Kufanele sizame amathekhiniki ngeso ukuze ngidambise ukukhathazeka. Yakha isithombe ngqondo sokobana aziphumulele. Lokhu kungaba kwelanga ogwini, izihlahla, zize zithonye e umoyana, amaqabunga kancane falling wena egcekeni. Lokhu kungaba Rhythmic zithonye hammock ngaphansi isibhakabhaka siluhlaza futhi izinyoni ngitshiyoza ngemuva. Uma ngeso lengqondo okuphumuzayo, siyazama ukuhilela izinzwa amaningi ngangokunokwenzeka. Iphunga kule ndawo? Yini uzwa? Yenza lokhu nsuku zonke kuze kuba njengoba zemvelo njengoba usebenzisa smartphone.
Zama amasu ukuphefumula
Zama amasu ukuphefumula ekhethekile zinikwa amakilasi yoga. Lobu buchwepheshe eziphathelene nokwelapha Ayurvedic, okuyizinto ezibangela ingqondo nomzimba ibe isimo sokuthula hlangothi. Sekungamashumi eminyaka INcwadi Yonyaka lezi izindlela ezisetshenziswa abasubathi abaphezulu emhlabeni ukuqeda ukucindezeleka nokukhathazeka. Vala eyodwa ikhala ngomunwe wakho, exhale ngokusebenzisa ikhala evulekile, bese uhogela ngokusebenzisa ke Nokho. Ngemva ngamunye ephefumula ushintsho ikhala. Uma uqaphela ukuthi-ke kulula uphefumula ikhala eyodwa ukudlula ngokusebenzisa ezinye, ungakhathazeki, lokhu kungokwemvelo.
Ukusetshenziswa self-lokukholisa empeleni inika yi yangempela. Kufanele ukhethe mantra, isiqubulo noma esigaba, okuyinto ungafunda engqondweni yakho ukuba balungiselele umcimbi, ukusebenza, noma ukuze nje ngomoya ophansi Suka sathane. Ungathatha noma iyiphi indawo eqondile ngawe. Kungaba kokubili amahubo avela eBhayibhelini, kanti iviyo ingoma metal. Kufanele ukhumbule ukuthi amathemba okuthi lo mcimbi wukuthi ngokuvamile kunzima kunalokho umcimbi uqobo lwaso.
Yenza izwi elingaphakathi ukuthi akathule
Ngaphakathi, wena uyobe cishe uhlala izwi ukuthi usenza umesaba nokungabaza. Kufanele ukubhekana imibono engakhi izwi lakho elingaphakathi iqiniso, okungukuthi, amazwi anjengokuthi, "Wena ezingaphezu kuka ukwazi ukubhekana umcimbi oluzayo," "kunezizathu eziningi ukuthi konke kuhambe kahle," futhi "wena uyakwazi, abanolwazi futhi bafanelwe, ukuze ujabule. " Kukhona izinhlobo ezine imibuzo ongazibuza yona, uma uzwa kusondela ngokuhlasela yokwesaba. Yiziphi ubufakazi bokuthi leyo micabango? Zikhona ezinye izindlela ukubheka lesi simo? Ingabe ngempela ukuba kubi njengalokho kubukeka lesi simo? Yini engenziwa ukuze uxazulule inkinga noma uzizwe kangcono?
Prestante ukunakekelwa ngokuthi abanye bacabangani
kwabokufika Social ngokuqondile okuhlobene izahlulelo abanye. Nokho, iqiniso liwukuthi zonke izahlulelo nemibono abanye abantu abanayo lutho wena nezindinganiso zakho ezibonakalayo neziphiwo zami. Ukwelashwa yokukhathazeka kuhlanganisa ukuqashelwa nangamaphutha azo, kanye renunciation isidingo ukwamukelwa ezivela emithonjeni yangaphandle. Nokuba umuntu ofuna ukuphelela - kuhle, kodwa ekuphileni kwangempela le akunakwenzeka. Ezimweni eziningi, abantu overestimate kangakanani nokuthi ezimbi abanye abantu abakucabangayo ngabo, futhi umphumela waba ukuthi bayacindezeleka nokuncane engacabanganga futhi bajabule.
Esikhundleni uzisola zonke iphutha kancane ngemva ekuxhumaneni komphakathi, kufanele umvuzo ngokwakho. Yiqiniso, awusebenzisi utshwala noma ukudweba imifanekiso emzimbeni entsha. Kufanele okungenani ukudumisa ngokwenzekileko uye waqunga isibindi futhi yaya emcimbini, ihlangane nabo ubuso nobuso ezesaba ngayo. Ngaso sonke isikhathi uma kontratakuete ukwesaba kwakho, wena ukunciphisa umthelela wabo wena, kubuthelelwa isibindi ukungena kabusha iringi nabo. Wena thatha emuva abanye balawule ukuphila kwakho kanye nakabili. Ufanelwe ukudunyiswa, futhi uzobe ngaphezulu eyashukumisela ngokuzayo.
Uma kwabokufika yezenhlalakahle ekuvimbela ukuba ngiphile ukuphila okuvamile, kufanele ushayele udokotela futhi ukuhlela ukuvakashelwa, njengoba kungenzeka, uzodinga usizo lochwepheshe. kwabokufika Social livela kancane, kancane kancane futhi kungabonakali, njengoba nje thinning izinwele. yokwelapha yezengqondo-kokuziphatha - enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza abantu aphathe, ngokuphambene ngokuzilimaza, engesiyo.
Ukuzenyeza futhi kanjani ukulwa naso
Kanjani ukuthuthukisa amandla intando? Ukuvivinywa amandla okumelana naso. Amandla: Psychology of Personality Development
Inkinga - Iyini? hle izinkinga zabantu. Indlela aphendule inkinga?
A amazwi ambalwa mayelana nomkhiqizo "Asoniya". Cushion: ukubuyekezwa kanye izici
Labyrinth - Iyini? okusho
Indlela ukuthuthela eCanada ukusuka Russia: Izimo, amadokhumenti, umehluko wemisindo nemiqondo yamagama